Ny Nest dia manavao ny fampiharana azy manatsara ny fifandraisany amin'ireo fitaovana marani-tsaina | Vaovao IPhone
Ny Nest angamba dia iray amin'ireo orinasa manararaotra ny fisintomana ananan'i domotics ankehitriny. Ary izany ve raha mitondra fitaovana maranitra ao am-paosintsika isan'andro isika, maninona raha manararaotra azy ireo ihany koa mba hamoronana trano fonenanay manokana fehezin'ny fitaovantsika manokana.
Ny thermostat marani-tsaina, ny fanairana amin'ny afo, ny jiro marani-tsaina, na koa ny fanaraha-maso an-tsaina ny tranontsika, dia sasany amin'ireo fampiharana azontsika omena an'ireo fitaovana ireo domody ny tranonay. Ary momba ity fampiharana farany ity, ny fanaraha-maso ny tranonay, io dia momba izay itondran'ny Nest ry zareo vaovao. Ary tsy misy zavatra tonga lafatra, fa ny zavatra ratsy dia ao anatin'ny rafitra fanaraha-maso dia tsy afaka manana zavatra izay tsy mampita fahatokisana tanteraka antsika, fantatry ny Nest ry zalahy ary nanatsara ny fampiharana Nest ho an'ny fakantsary fakan-tsariny fotsiny izy ireo. Ny vaovao: Nohatsarain'ny Nest ny fikajiana ny faritra fampiharana azy ary ny fampandrenesana manaraka ho an'ny fakantsary Nest Cam Indoor sy Nest Cam Outdoor.
Angamba maro aminareo no ho very miaraka amin'izany, ny marina dia ianareo Ny fakantsary dia manome rafitra fanaraha-maso lehibe ho an'ny tranonay, ary ny zavatra tsara indrindra dia na dia mitaky fivoahana voalohany aza izy ireo, dia ho mora vidy kokoa noho ny serivisy omen'ny orinasa fiarovana, mazava ho azy fa samy manana ny tombony azo avy aminy ny rafitra tsirairay. Ny fanavaozana izay ny zazalahy Ny Nest dia hamela antsika hamaritra faritra azo antoka sy faritra mety hampidi-doza, fa ny zavatra tsara indrindra dia izao ny fakantsary, miaraka amin'ny fampiharana Nest vaovao, Hahafantatra ny varavarana ho azy ireo izy ireo ary hamaritra azy ireo ho "Zone d'activité".
Zavatra tena mahaliana hatramin'ny Azontsika atao ny misafidy izay varavarana marefo, sy ireo fampandrenesana izay alefan'izy ireo amintsika araka ny varavarana iza, izany hoe, azontsika atao ny mamaritra izay varavarana manome fidirana mankany an-tranontsika avy any ivelany, ary izay tsy, tsy mahazo fampandrenesana avy amin'ny fampiharana tsy tapaka. Vaovao mahaliana izay miharihary fa ho mora ho an'ny tompon'ny Nest Cam Indoor sy / na ny Nest Cam Outdoor. Ary ianao, Efa manana domoteised ny tranonao ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny Nest dia manavao ny fampiharana azy manatsara ny fifandraisany amin'ireo fitaovana marani-tsainy
Ivanciko dia hoy izy:
Akany mifanaraka amin'ny Apple homekit ??? Na ny fitaovana Nest aza tsy mifanaraka amin'ny homekit Apple ... ary tena miahiahy aho fa ho ao anatin'ny fotoana fohy izy ireo! Ampahatsiahiviko anao fa marika google izy io. Ka izay lazainao no tsara indrindra manararaotra homekit .... mandainga! Ampahafantaro tsara ny tenanao!
Mamaly an'i Ivanciko
Miala tsiny aho fa tsy hiverina intsony izany. Nahitsy.
Ny tena zava-dehibe dia satria hatramin'ny omaly isika dia afaka miditra amin'ny raki-peo avy any Espana (Nest Aware). Miaraka amin'ny drafitra isam-bolana na isan-taona, ary miaraka amin'ny fitehirizana mandritra ny 10 na 30 andro. Hatramin'izao dia tsy nahita afa-tsy ny sarin'ny adiny 3 farany izahay sy ny velona, ​​ary tsy nisy dikany firy izany, izao dia mendrika izany. Mbola famandrihana hafa ihany koa…. Ah raha izany dia.